Ny United Executive Executive dia nampandre ny lesoka azo antoka amin'ny COVID-19
Home » Lahatsoratra farany farany » Podcasts » Ny United Executive Executive dia nampandre ny lesoka azo antoka amin'ny COVID-19
Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Hawaii • Vaovao • Podcasts • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Rehefa manidina amin'ny Emirates na aiza na aiza eran'izao tontolo izao, ny fizahana mari-pana alohan'ny hidirana amin'ny fiaramanidina ary ny fizahana COVID-19 dia mahazatra.
Rehefa manidina any Etazonia any Etazonia dia takiana ny fitsapana COVID-19 rehefa manidina any Hawaii mba hisorohana ny quarantine, fa ny fanaraha-maso ny maripana dia tsy ilaina intsony na aiza na aiza rehefa manidina amin'ny sidina anatiny.
eTurboNews Androany dia niresaka tamin'ny mpiasan'ny Serivisy serivisy ho an'ny Serivisy 1K United Airlines roa sahiran-tsaina momba ity toe-javatra ity. Delta Airlines dia nanondro tranonkala iray izay tsy takatry ny saina ary tsy namaly ny American Airlines.
Inona no mahazatra rehefa mandeha any amin'ny trano fisakafoanana na fivarotana dia toa enta-mavesatra tsy te-hiatrika ny seranam-piaramanidina amerikana.
Ny ben'ny tanànan'i Honolulu, Kirk Caldwell, dia sahiran-tsaina ihany koa ary maniry ny hanova ity politika ity farafaharatsiny ao amin'ny Airport International Airport. Niaiky izy fa haneho i Hawaii Aloha tsy ho an'ireo vahiny tonga ao amin'ny Fanjakana ihany, fa maniry ihany koa ireo mpitsidika mba ho salama tsara any an-trano.
Henoy ny podcast amin'ny fisafotofotoana tsy mampino sy ny hevitra matanjaka rehetra manontany tena momba ity politika tsy takiana intsony ity.
Ireo zotram-pitaterana an'habakabaka io ihany anefa dia mihidy ny lalitra, tsy manome serivisy sakafo, ary indray mandeha eo amin'ny sezanao misy rano iray vera aza hadino ny sarontava.
Fitsangatsanganana an-tsehatra maro ny olona tsy vonona handray, ary mavesatra kokoa aza ny famerenana ny sehatry ny fizahan-tany sy fizahan-tany.
Tsindrio eto raha hanao podcast